निफ्रासहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
निफ्रासहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| १६:५८:२२ मा प्रकाशित
२६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार शेयरबजारमा ११ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन ४ वाणिज्य बैंकसहित ११ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो ।
यस दिन नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्स, मेगा र सनराइज बैंकसहित ११ कम्पनको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सीइबीडी हाइड्रो, बरुण हाइड्रोपावर र रिडि हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्टिसीटी, नागरीक लगानी कोष र अरुण भ्यालीको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा सीइबीडी हाइड्रापावर कम्पनीको शेयरमा खरिद माग आएको छ । सीइबीडी हाइड्रोको हिजो आईपीओ सूचीकृत भएको हो । आईपीओ सूचीकृत पश्चात आजदेखि नेप्सेमा कम्पनीको कारोबार सुरु भएको हो । कारोबारको पहिलो दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ ।
सीइबीडी हाइड्रापावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ९ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा ९ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश शून्य रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४१ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४५७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
बरुण हाइड्रोपावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ४ लाख ९७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा ४ लाख ९७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ९७ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४८ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५३७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस दिन रिडि हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा १ लाख ३ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग आउँदा बिक्री आदेश न्यून हुँदा शेयरमूल्य ९।८९ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ५४ रुपैयाँले बढेर प्रतिबित्ता शेयरमूल्य ५७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख ६३ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
आज बैंकको शेयरमा खरिद माग र बिक्री आदेश केही अन्तर रहेकाले बैंकको शेयरमूल्य घटेको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य १२ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५४९ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस दिन लगानीकर्ता नेपाल बैंकको शेयरमा झुम्मिएका छन् । बैंकको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश १ लाख ८८ हजार कित्ता रहेको छ ।
बैंकको शेयरमा खरिद मागको तुलनामा बिक्री केही समान हुँदा शेयरमूल्यमा सामान्य अंकले बढेको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य ५ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४५४ रहेको छ ।
मेगा बैंकको शेयरमा ३ लाख ७७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । ३ लाख ७७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको बैंकको शेयरमा १ लाख ७७ हजार बिक्री आदेश रहेको छ । बैंकको शेयर सामान्य अंकले बढेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अनलाईनमार्फत सुझाब माग्दै राष्ट्र बैंक ७ दिन पहिले
बाख्रा चराएर घर ल्याउँदै बालबालिका २ दिन पहिले
योगभूमि नेपाल योग एवं तन्त्रसम्बद्ध ज्ञान–विज्ञानका अध्येताका लागि विश्वकै मूल गन्तव्य बन्न सक्छः राष्ट्रपति ४ दिन पहिले
‘सेनिटरी प्याड’ बनाउने अभियानमा महिलाहरु ४ हप्ता पहिले
सत्यवती तालसम्म पुग्न केवलकार जडानको तयारी २ हप्ता पहिले
ओली फेरी एक कदम पछाडि हट्ने ७ दिन पहिले
ओलीविरुद्ध देशव्यापी प्रतिकारमा उत्रन नेता कार्यकर्तालाई नेपाल पक्षको आग्रह ३ महिना पहिले
माइतिघर नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला २ वर्ष पहिले
राहत माग्न आउने श्रमिकलाई गाउँपालिकाले दियो रोजगारी १ वर्ष पहिले
आज देशभरको मौसममा बदली, ठूलो पानी पर्ने सम्भावना ९ महिना पहिले